Gardarada Faysal,yaanay Gama”a u diidin Guddida Diiwaangalinta Ururada ( Dacwada Xisbiga UCID) | Berberatoday.com
Gardarada Faysal,yaanay Gama”a u diidin Guddida Diiwaangalinta Ururada ( Dacwada Xisbiga UCID)
“Goaankani markii uu soo baxey marka laga tago guusha gaar ahaan uga soo hoyatey Faysal Cali Waraabe, waxay dhaawac weyn ku keentay sii jiritaankii Xisbiga UCID. Wuxuu xisbigii afka saarey wadadii burburka iyo kala daadsanaanta, manayna muuqan si xisbigaasi lagu soo kicin karo ama dib loogu soo celin karo golaha xisbiyada ee magac iyo milgaba leh”.
Afartaa dheh, Deelleey! Dig siiyee ku soo noqo
Demmenaha warkiisii Dadka waxa ka soo dhacay
Duruustii la barayoo, Daarihii burburay shalay
Waxa maanta kaga daran Iimaan darnaantiyo
Nabaad-guurka diintiyo Kaga dhacay damiirkoo
Dal waxaan ku noolahay Saddexdii dalaaqood
Lagu furay dadnimadii. Dal waxaan ku noolahay
Runtu arag darraysoo Daaddihi! la yidhi been.
Hadday dunida ceeb tahay Dus-duskiyo khiyaamadu,
Noo dabeecad weeyaan. Nin dillaala mooyee,
Degmadaan ku noolahay Nin daryeel yidhaahdaa,
Maansadaii Daba taxan Abwaan MAxamed Xaashi Dhamac Gaarriye -IHUN.
Xisbiga UCID waxaa leh bulshada Soomaaliland,waxaa maalgalisay bulshada Soomaaliland, waana hantida qaranka Soomaaliland.Waxyeelaynta Xisbigaa iyo kuwa kaleba waa hanti qaran oo la burburinayo oo keensanaya in danbi qaran ummada iyo dalkaba laga galay. Qaranimadii ayaa la soo weerarey ayey tidhi gabadh aad u da yar oo joogtay goobihii lagu curyaaminayey askartii Inqiaabka ku samaynaysay madaxweynaha Turkiga ee maalintii Jimcihii ee ay bisha Luulyo aheyd 16, 2016
Maaha markii koowaad ee Faysal Cali Waraabe uu Maxkamada u tago dacwad ku saabsan Xisbiga UCID. Bahda Mareegta Farshaxan ayaa taageero laxaad leh u fidisay markii ay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro iyo Aadan Mire Waqaf ku soo oogeen Faysal Cali Waraabe dacwad ka dhan ah.
Cabdiraxmaan Maxamed Ciro wuxuu la aasaasey Faysal Xibiga UCID, Halka uu Aadan Mire Waqaf(IHUN) oo markaa ahaa guddoomiye-ku-xigeenka 1aad ee xisbiga uu waqti badan iyo dadaal badan galiyey siduu xisbigu u noqon lahaa mid hanqaada.
Faysal markan laba jeer ayuu isku soo sharaxey Madaxweyne, hase yeeshee labada jeerba wuu hoobtay. Dadka reer Soomaaliland umay arag inuu mudan yahay inuu u noqdo madaxweyne. Mar dadka reer Soomaalialnd waxay doorteen mudane Daahir Riyaale Kaahin ( 2003) , marna waxay doorteen mudane Axmed Maxamed Siilaanyo (2010).
Tani waxay dhalisay in hogaankii ka hooseeyey ee xisbiga UCID ay u soo bandhigaan Faysal inuu iyaga fursad siiyo. Hase yeeshee sharciga UCID markaa diidmo muu muujinayn in Faysal sii ahaado gudoomiye, xilli musharaxna layslama gaadhin. Sidoo kale ayaa Cabdiraxmaan Ciro oo ka hadlaya Faysal Cali Waraabe sheegay inuu dhmaadey xilligiisii hogaamineed uuna la mid yahay lacagtii gobolada bariga Soomaaliland laga badaley ee Giimbaarta la odhan jiray. Sidoo kale ayaa waxaa dib u dhac weyni ku yimid shirweynihii xisbigu yeelan lahaa. Shir degdeg ah oo kooxda taageersan labadan hogaamiyena ( Ciro iyo Waqaf) ay qabteen waxayna doorteen inuu Aadan Mire Waqaf(IHUN) yahay hogaamiyaha ku-meel gaadhka.
Waa arimahaa halka ay bahda mareegta Farshaxan u aragtay in Faysal ku toosan yahay, ayna taageero buuxda ugu fidisay. Gaal dil gartiisana sii ayey Soomaalidu ku maahmaahdaayee, Faysal ayey garabsiisay mareegta Farshaxan. Waxaaney Mareegta Farshaxan taageero ahaan soo bandhigtay qoraal ay baadi-sooc uga dhigtay Ma Cirro ayaa ah Gardaro garab og ah, Mise Faysal baa giimbaar ah?
Waxaa kale oo xilligaa intaan goaanka maxkamadu soo bixin taageeray saadaasha Bahda Mareegta Farshaxan mudane xildhibaan Xaaji Cabdi Waraabe oo yidhi : Waxaan ku idhi Ciro Iyo Waqaf, Faysal Cali Waraabe muu dhicin isagaana Xisbiga keenay, xukuumadu ama maxkamad ha u gudbiso ama ha xukunto, Hadaan qabyaalad ku shaqaynayo berigii Garxajis baxay ayaan raaci lahaa
Goaankii maxkamada ee kama danbeysta ayaa ku soo baxey sidiii qoraalka mareegta Farshaxan uu sii saadaaliyey. Gartu markay cadahay waa sida dayax 14aad ah oo qof waliba wuu arki karaa, daahna lama saari karo.
Bishii Sebtember horaanteedii, gugii 2011dii ayey Maxkamadu soo saartey goaankii kama danbeysta ahaa oo odhanaya inuu Faysal Cali Waraabe yahay gudoomiyaha rasmiga ah ee xisbiga UCID, cirkana loo laaley dacwadii labada mudane ee Cabdiraxmaan Ciro iyo Aadan Waqaf(IHUN).
Goaankani markii uu soo baxey marka laga tago guusha gaar ahaan uga soo hoyatey Faysal Cali Waraabe, waxay dhaawac weyn ku keentay sii jiritaankii Xisbiga UCID. Wuxuu xisbigii afka saarey wadadii burburka iyo kala daadsanaanta, manayna muuqan si xisbigaasi lagu soo kicin karo ama dib loogu soo celin karo golaha xisbiyada ee magac iyo milgaba leh. Muu laheyn xubno tiro leh oo bixin kara awooda dhaqaale ee xisbigaasi ku sii jiri karo, xafiisyadii xisbigu ku lahaa gobolada, degmooyinka, iyo tuulooyinka dalka ayaa intooda badan albaabada loo xidhay. Xubnihii ugu firfircoonaa ee xisbiga hormood u ahaa ayaa ka digo rogtay oo ka dareeray.Faysal Cai Waraabe wuxuu noqday nin geeri go;an jooga oo biyo raadinaya ama nin ay dooni a gadoontay oo badda dhexdeeda ka raadinaya geed a cuskado.
Intaa wixii ka danbeeysey waxaa god madow sii galayey bilicda iyo himilada Xisbiga. Dadku waxay filayeen wajiyo cusub iyo dibu habeyn lagu sameeyo xisbiga. xisbiga UCID wuu sii shiiqayey oo dhimbiilo diiran iyo holac hor leh ayuu u baahnaa si uu u helo taageero lagu doogsan karo.
Xisbigii UCID ayaa gaadhey heer aad u hoosaysa, gargaar degdeg ahna in loo doono u baahan. Shirkii golaha dhexe ayey xubnihii tirada yaraa ee markan ku jiray xisbiga ay ku qabteen Hudheelka Crown. Shirkaasi wuxuu socday inta u dhaxeysay labad maamood oo kaa ahaa 5tii ilaa 6dii ee bishii Janaayo 2012kii. Waxaa shirkaa lagu doortay inuu gudoomiyaha Xisbiga UCID ahaado mudane Faysal Cali Waraabe.
Sidaa darted ayaa khudbadii uu Faysal Cali waraabe halkaa ka akhriyey uu ku bilaabey: Dhaqaale ahaan iyo jidh ahaanba waan burburay. Iminka laga bilaabo isuma soo taagayo doorashada Madaxweynaha. Cidda uu Xisbigu u arko in ay ku habboon yihiin ayaa loo dooran doonaa Murashixiinta Madaxweynaha Xisbiga.
Qofna afkiisa lagama xaal mariyo, dhagaha bulshaduna way soo jeedeen odhaahdaa markuu laha Faysal. Kaydka ummada reer Soomaaailand-na wuu ku jiraa.Xilligan waxaa is-afgaranwaa xoog ihi ka dhex dhacey kooxihii UDUB. Waxaana ka soo goostay koox uu ka mid ahaa Jamaa Cali Xuseen. Xubnihii ku sii hadhey UCID waxay go;aan midaysan ku gaadheen inuu Faysal ku hogaamiyo raadinta dad xisbigan badbaadiya dhaqaale ahaan iyo xubin ahaanba. Waxaana la go;aansadey in la heo musharaxiin dhaqaalena haya , ummaduna u heelan tahay raacitaankooda.
Horaantii bishii Maarso ee gugii 2012 ayaa waxaa hirgaley in wadahadalo dhex maraan hogaanka xisbiga UCID iyo kooxdii ka soo digo rogatey UDUB ee uu hogaaminayey Jamaal Cai Xuseen iyo Cabdirashiid Xasan mataan.Waxaa labada kooxood ku heshiiyeen qodobo ay ka mid ahaayeen kuwani:
1. Musharaxnimda madaxweynaha iyoi ku xigeenkaba in ay yeeshaan siyaasiyiinta UDUB doorashada soo socota
2. Sidoo kale in kooxda uu Jamaal Cali Xuseen hoggaaminayo la siiyo Xoghayaha Guud iyo Af-hayeenka Xisbiga
3. Waxaa Golaha Dhexe ee Xisbiga laga dhigay 250 xubnood oo 100 ay keenaan UCID, 100 kalena ay keenaan kooxda uu hogaaminayo Jamaa Cali Xuseen ee UDUD ka timid iyo in la qaybsado 50ka xubnood ee soo hadhay.
Waxaana go,aamadaa lagu saxeesay heshiiskii ka dhacey Hudheelka Ambaasador bishii Oktoober 16dii, 2012kii.
Waxaa waayo cusbi u baryeen kooxdii la daalaa-dhaceysay xisbigii UCID, waxaa laga dareemay Faysal Cali Waraabe inuu helay garab iyo gaashaan. Manuuna qarsan waxaanu Faysal ggobo kala duwan kaga dhawaaqan odhaahdan oo siyaalo kaa duwan u dhigan: Waa nin(Jamaal) aan in badan aan aqaaney, aanu xidhiidhi jirnay ilaa iyo 1999, waa nin vision(aragti) leh, waa nin ay qabyaaladu ka maqan tahay, waa nin dhaqaalaha yaqaana, wadankuna wuu u baahan yahay in qof dhaqaalaha yaqaanaa uu hogaanka qabto, waxaan filayaa in himilooyinkii aan xisbiga u sameeyey iyo barnaamijka u dhisan inuu hirgain doono oo wadi doono . Waxaanu xisbigii ku sii jaanqaadey magaca NEW UCID.Iyadoo la cadeynayo inaanu aheyn kii bulshadu codkooga ku diideen , ee xubno cusub oo magic iyo milgaba leh ay hogaaminayaan, xubnana ka yihiin markan.
Denbi dhacay masuul ma leh. Markaad hebel duqaysaa,
Reer hebel damqanayaan. Ninkii dood ka keenana
Dicaayado raqiis iyo Waxaa lagu didsanayaa
Cid baa kaa dambaysoo, Ninkii dooxi kara boog
Maansadaii Daba taxan Abwaan MAxamed Xaashi Dhamac Gaarriye -IHUN-
La soco qaybaha danbe ..
Afar cisho oo UCID sharcigu u siiyay olaha doorashadii golaha degaanka 2012-waxa uu Aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen u kala gooshay Hargeysa,Sheekh, Gebiley, Burco, Boorama iyo Ceerigaabo. Wuxuu ahaa murashaxii kowaad ee gaadha magaalada Laascaanood ee caasimadda Sool. Engineer Faysal Cali-Waraabe wuxuu afarta cishaba joogay Hargeysa iyo Sallaxley
Qolka Kaydka Mareegaha Farshaxan
Aragtidayda Iyo Halka Uu Khilaafka UCID Ku Aroorayo –
Siciid Maxamuud Gaheyr
Xubin Golaha dhexe ee UCID
(Faysal Cai oo ka waramaya sababta uu u doortey musharax Jamaal Cali Xuseen )
Mareegta Xisbiga UCID